दैलेखको नारायण नगरपालिका –२ जारकोटकी ३२ वर्षिया रत्नकला थापाले गतवर्ष काँक्राबाट २ लाख रुपैया कमाउनु भयो । शुरुकै वर्ष २ लाख रुपैया आम्दानी गर्न सफल भएपछि अहिले उहाँ व्यावसायिक रुपमै तरकारी खेतीमा जुटनु भएको छ । पहिला आफैले खान मात्र लगाउथ्यौ, बढी भयो भने मात्र बेच्थ्यौ, अहिले व्यावसायिक रुपमा लगाएका छौ, उहाँले भन्नुभयो, ‘मकै, गहुँ मासेर काँक्रा लगाउदा २ लाख रुपैया नेट आम्दानी भयो ।’
जारकोटको करलेआवत कृषक समुहलाई उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजनाले बेमौसमी तरकारीमा सहयोग गरेको छ । आयोजनाकै प्रेरणाले गर्दा करलेआवत समुहमा आवद्ध धेरैजना गाउँले व्यावसायिक तरकारी खेतीतर्फ आर्कषित भएका छन । व्यावसायिक रुपमा तरकारी खेती गर्ने हामीलाई थाहाँ नै थिएन, आयोजनाले नै तरकारी खेती गर्न सिकायो थापाले भन्नुभयो । काँक्राबाट तरकारी खेती थाल्नु भएकी उहाँले अहिले काउली, बन्दा, आलु, टामाटर, प्याज, काँक्रा, करेला खेती गर्नु भएको छ । यो सिजनमा तरकारी बेचेर एक लाख रुपैया आम्दानी गरिसकेको थापाले बताउँनु भयो ।
तरकारी खेतीबाट थोरै मिहिनेत र लगानीमा धेरै आम्दानी हुने देखेपछि भैसी पाल्दै आउनु भएकी थापा भैसी हटाएर व्यावसायिक तरकारी खेतीलाई विस्तार गर्ने योजनामा पुग्नु भएको छ । आयोजनाले निर्माण गरिदिएको सिंचाईको पानी सवैलाई पुग्दैन, त्यसैले नीजि खर्चमा पानी ल्याएर तरकारी गर्ने सोचाई बनाएका छौ उहाँले भन्नुभयो, छिमेकीको जग्गामा पानीको मुहान छ त्यो किन्ने सोचाईमा पुगेका छौ ।
तरकारी खेती गर्न थालेपछि उहाँलाई पैसाको पनि समस्या परेको छैन । तरकारी बेचेकौ पैसाले जेठोछोरा झलकलाई कृषि जेटिए पढाउनु भएका छ । जागिर खानको लागि नभई कृषि व्यावसाय गर्ला भनेर छोरालाई कृषि जेटिए पढाएको उहाँले बताउनु भयो । छोरा झलक पनि कृषिप्रति निकै रुची राख्ने गर्छन । उनी कलेजमा सिकेको कुरा घरमा आएर प्रयोग गर्छ । मल कसरी बनाउने ? रोग किराहरु कसरी नियन्त्रण गर्ने ? कुन कुन जातका तरकारी लगाउने ? बेर्ना कतिवेला लगाउने ? जस्ता कुराहरु झलकले नै बुवाआमालाई सिकाउने गर्छन । १६ वर्षिय झलक फुर्सदको समयमा कुटो कोदालो लिएर खेतवारीमा पुगिहाल्छन । घर नजिकै कृषि जेटिए पढाउने कलेज त्यसैले पनि उनलाई सजिलो छ ।
उच्च मूल्य कृषि बस्तु विकास आयोजनाले उहाँ आवद्ध कृषक समुहलाई प्लाष्टिक सिट, मल्चिङ्ग प्लाष्टिक, डिजिटल तराजु, क्रेट, स्प्रेयर, झारी, थोपा सिंचाइ, प्राविधिक सेवा खरिदमा सहयोग गरेको थियो ।